အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအွန်လိုင်း:အခမဲ့ Xxx ဂိမ်းအတွင်းအပြင်!
မင်္ဂလာပါ၊မှကြိုဆိုပါတယ်ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအွန်လိုင်း။ အသောသူတို့အဘို့နှင့်အတူကျွမ်းတဝင်အယူအဆများ၊စီမံကိန်းအရစေရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ရှင်းပြဖို့သင်သည်ဤအကြောင်းအသွားခရီးအတွက်အွန်လိုင်းညမ်းဂိမ္းချမ်းသာ! အခါပထမဦးဆုံးဇူလိုင်လထဲမှာစတင်ခဲ့ ၂၀၁၆၊အကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်း၏ရုံ ၁၈–ယနေ့အချိန်တွင်၊ကျနော်တို့ကျေနပ်သင်ဆောင်ကြဉ်းရန်အကျော် ၂၇ အံ့သြဖွယ်၊အားလုံးအရာ၏၁၀၀%သီးသန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်း! ဤမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်အဘယ်သူမျှမနေပါစေဘယ်မှာသင်အွန်လိုင်းသွား၊သင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေရှာတွေ့ဂိမ်းအကြောင်းငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ။, ထိုသို့လာမယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းအတွက်ကွန်ယက်တစ်ခု၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နောက်ဆုံးလက်ခံရန်အဆင်သင့်အသစ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ကမ္ဘာကိုပြရန်ကြွလာသောအခါကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်း XXX၊အဘယ်သူမျှမပါဘူး။ သင်ကြိုက်လျှင်သင်၏အသံအဘယ်သို့ငါပြောတော့သေချာပါစေဖို့အကောင့်ဖန်တီးရန်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသကဲ့သို့။ နောက်တစ်နည်း၊သင်ရွေးချယ်ဖို့ဆက်လက်ဖတ်ရှုချအောက်တွင်နှင့်ငါသည်သင်တို့ကိုပြောပြလိမ့်မယ်အရာအားလုံးကိုသင်တို့လိုအပ်ကြောင်းသိရန်ဤစိတ်ကူး။ ကျေးဇူးတင်ဖို့အချိန်ယူပြီးရပ်တန့်ဖို့အားဖြင့်၊ငါသည်သင်တို့ကိုခံစားမျှော်လင့်ပါတယ်သင့်ရဲ့အချိန်အတွင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအွန်လိုင်း!
အများကြီးအဖွဲ့ဝင်များအပေါ်အသင်းရုန်းကန်အတွက်အတိတ်နှင့်အတူပေးဆောင်ငွေအများကြီးအတွက်အားကစားပြိုင်ပွဲအကြောင်းနောက်ဆုံးမှာဘဲကယ်နှုတ်သူတို့ဘာပြောမယ်လို့။ ၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်ဤဖို့ဆုံးဖြတ်၊ငါတို့သည်အလွန်အစောပိုင်းအပေါ်ငါတို့သည်ငါတို့၏အသိုင်းအလုံးဝအခမဲ့ကစားရန်။ ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်တက်လက်မှတ်ထိုးနိုင်ဒီနေ့ဘဲတစ်ခုတည်းတစ်ပြား။ ၏အကျိုးကျေးဇူးအဘို့ဤအသုံးပြုသူသည်လျှင်သူတို့မပျော်နှင့်အတူအတွေ့အကြုံ၊သူတို့ရိုးရိုးထားခဲ့ဖူးပါတယ္။ အမှာက်၊ဒါကြောင့်အပေါ်ဖိအားတတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်တီးအလွန်ကြီးစွာသောထုတ်ကုန်သေချာစေရန်ပြန်လာပြီးနောက်နေ့တစ်နေ့၊တစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်၊တစ်လပြီးနောက်။, နှင့်အတူတစ်ဦးအပြန်အလှန်ခ်ိန္ညွိ၏အလိုရှိသောရလဒ်တွေ၊ကျနော်တို့အခိုင်အမာယုံကြည်ဤသည်အကောင်းဆုံးသောခြေလှမ်းရှေ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်း။ ထို့အပြင်၊ကျွန်တော်တို့ဟာချင်မှလုပ် ၁၀၀%အလုပ်အကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းလိုအပ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်တွက်ပေးဆောင်ဖို့အမိန့်ဖြည့်စွက်ရန်ဂိမ်းအတွင်း:အားလုံးကျွန်ုပ်တို့၏ဘွဲ့ပြီးစီးနိုင်မှာဆီလျော်ကာလအချိန်တစ်ပြားပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ။ ငါတို့သည်လည်းအစီအစဉ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအွန်လိုင်းအဘို့ဤကဲ့သို့နောင်အနာဂတ်။ နောက်ဆုံးမှာ၊ထိုအဖွဲ့မစီစဉ်ငွေကြေးထည့်ဝင်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်း၊ဒါပေမယ့်လာကြမည်မှာအဝေးနောက်ပိုင်းရက်စွဲ။, ရိုးရှင်းစွာကိုထား၊သင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသည်အခါသင်တက်လက်မှတ်ထိုးရန်ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်း၊ရတဲ့င်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံတတ်နိုင်သမျှသင်ဖို့ရှိသည်မည်မဟုတ်များအတွက်ပေးဆောင်ဖြစ်စေ!
သငျသညျအစဉျအတက်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ဝက်ဘ်ဆိုက်မီတကယ်အသေးအရေအတွက်။ ဒီပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့ဧရိယာ! ကျနော်တို့လောလောဆယ်တွင်များ၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှု ၂၇ ဂိမ်းများနှင့်အတူ၊နောက်ထပ်အစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းဖို့နောက်ထပ် ၆ လာမယ့်အတွက် ၁၂ လများ။ ဒါဟာသင့်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကဖန်တီးအားလုံးသည်ဤဂိမ်းအတွက်-လံုးခ်င္းအိမ္:အဘယ်သူမျှမအပြင်ဘက်တိုင္ပင္ေ၊လိုင်စင်သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အစီအတွက်ခွင့်ပြုမယ်လို့အခြားသူကိုဝင်ရောက်ဖို့ဂိမ်းများရှိသည်။ ဤမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အားကစားအရာကိုငါတို့သည်အတွင်းအပြင်၊သင်လိုအပ်မယ်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးပါ။, အားလုံးကျွန်ုပ်တို့၏အဂိမ်းများများတစ်လျောက်ပတ်သောအဆင့်အမျိုးမျိုးအပါအဝင်၊တစ်ဦးအရောအနှော၏အဓိကအမျိုး၊အနုပညာစတိုင်များနှင့်တော့။ ယူဤချဉ်းကပ်မှုအကြောင်းဒါကြောင့်မည်သည့်တစ်ဦးချင်းစီမှလာမယ့်ကျနော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းရှိသည်ဖို့ဖွယ်ရှိသည်ကြီးစွာသောအချိန်နှင့်ရှာတွေ့တစ်ခုခုမှာအနည်းဆုံးသူတို့ကပျော်မွေ့။ တိပေးမပေးနိုငျသောသင်ချစ်ရန်သွားကြသည်တိုင်းများ၊အခွင့်အလမ်းတွေကိုများမှာအများစုသူတို့ကိုမည်ဖြစ်မှသက်ဆိုင်ရာသင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွား။ ဤအပြင်၌၊ကျနော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေလိုကြောင်းတုံ့ပြန်ချက်မှကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအရေးကြီးဆုံးအရာတိုးတက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်း။, ကြၽန္ေတာ္တိုယူကြီးသောခြေလှမ်းများကျနော်တို့အဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ရေးသောသူလူတို့နှင့်အတူငါတို့ XXX ညစ်ညမ်း။ ထိုအသုံးချပြီးတရားဝင်ဆွေးနွေး၊သို့မဟုတ်အဖက်ဆာဗာက၊ကျွန်တော်တို့ပေးကျွန်တော်တို့ကိုသိစေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်နေတယ်အဘယ်သို့ပြုသောအမှုနိုင်။
တဦးတည်းကြီးမားသောနည်းလမ်းများအကြောင်းဆိုဒ်များရှိသည်ရုန်းကန်အတိတ်အတွက်အတူအနိမ့်အရည်အသွေးအဂရပ်ဖစ်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌အပြာဂိမ်းအာကာသအဖြစ်၊ကျနော်တို့ယေဘုယျအားဖြင့်အပေါ်မှီခိုအမြင်အာရုံမယ်လို့ထင်ကျော်အားလုံးထက်။ လို့ပြောလုံလောက်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ဂိမ်းခဲ့သည့်ထုတ်လုပ်ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူစိတျထဲမှာ၊သင်ဘေးကင်းလုံခြုံလက်၌အခါတွင်းအပြင်။ ယူလေ့လာရန်အချိန်ကိုအားလုံးအမျိုးမျိုးသောအင်ဂျင်တွေကိုအသုံးချပြီးနောက်ဆုံးမှာအပေါ်အခြေချညွှတ်ရေးအင်ဂျင်ကရမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှု။, ဤစိတ်ကူးရွေးချယ်မှုအပေါ်နှစ်ဦးစလုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ရပ်ရွာအဆင့်:ငါတို့သည်ယခုရှိသည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့စဉ်းစားခံရဖို့အများဆုံးအမြင်အာရုံရင်သပ်ရှုမောဖွယ်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုဂိမ္းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်စကင်ဖတ်စစ်ဆေး၏ယှဉ်ပြိုင်ပြသတဲ့အထိကြိုတင်ပြီးလူတိုင်း:ကျနော်တို့စီစဉ်ထားကြောင်းလမ်းလွန်း! ပါကကျေးဇူးပြုပြီးသင်လည်းရယူနိုင်ပါအားလုံးဂိမ်းကျနော်တို့အနေဖြင့်သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်:နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်အရာက္ဇာတပ်ဆင်၊သင်သွားကောင်းပါတယ်။ မိုဘိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိစွာအသုံးချရန်အောင်ဂိမ်းများကြည့်ရှုစိတ်ကူးပေါ်သေး။, ဒါကြောင့်အနှစ်သာရထဲမှာ၊သင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းညစ်ညမ်းဂိမ္းအဘယျသို့အဘယ်သူမျှမနေပါစေစက်တာအတူလုပ်ကိုင်။
ကျေးဇူးသင်တို့အဘို့ဤမျှလောက်အချိန်ယူပြီးအကြောင်းကိုအားလုံးဖတ်ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအွန်လိုင်း:ငါမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းဤလျင်မြန်စွာအက်ဆေးပေးသင်နှင့်အတူတွေအများကြီးသတင်းအချက်အလက်ကအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ရှိသည်။ သဘာဝအရ၊ပဒေသာရှိပါတယ်ပိုပြီးဝင်ရောက်ဖို့အကြောင်းသင်ယူမှအတွင်း၊ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသကဲ့သို့အဘယ်အရာကိုမြင်သွားမယ့်အပေါ်ကိုယ်အဘို့။ သတိရ:တက်လက်မှတ်ထိုးလုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးထက်လျော့နည်းကြာ ၆၀ စက္ကန့်။ ကိုသင့်ရဲ့အချိန်ကိုဖြုန်းရပ်တန့်နှင့်အတူခရီးကမကယ်မနှုတ်မ–အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအွန်လိုင်းတစ်ခုတည်းသောအမည်ကိုသင်လိုအပ်ယုံကြည်စိတ်ချဖို့မှကြွလာသောအခါၡမ်ားဂိမ်းကစားခြင်းပျော်စရာ။, စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးပျော်ရွှင် jerking!